NAV - Quanzhou Omi n'uwe Co., Ltd.
Ejiri eriri bamboo mee akwa textiles. A maara achara maka ụkpụrụ nhazi osisi; ma, teknụzụ na-adịbeghị anya nwere ike ịmepụta ihe ọhụrụ nke achara nke bụ eri / eriri. Bamboo fiber n'onwe ya bụ ihe ọhụrụ mana ụlọ ọrụ eri malitere ijikọ ya na ihe ndị ọzọ dịka nhazi nke textiles gụnyere spandex. A na-ebu ụzọ kpochapụ achara n'ime obere iberibe tupu enzyme na-emebi ma na-amịkọrọ mmiri ma na-asacha ya iji mebie elu nke eriri bamboo.
Ejiri akụrụngwa na akwa nkasi na nke achara spandex. Ha abughi ihe eji eme ihe eji eme ya, obu ihe eji akwado ya nke oma n’egwuregwu ebe obu na iku ume. Esemokwu agaghị akpasu anụ ahụ iwe, n'eziokwu, ọ ga-anabatakwa ọsụsọ na ọ na-agba ngwa ngwa nke mere na ọ zuru oke maka ndị egwuregwu na ndị ọzọ. Sportek nwere obosara ndokwa nke owu na achara spandex jersey ọ bụ a zuru okè n'ebe ịchọta zuru okè imewe na elu mma.
Ọ bụ ihe akụrụngwa na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma, ọ na-egbochi nje. Nnyocha na-egosi na akwa bamboo nwere ọkwa ụfọdụ nke nje na-egbochi nje megide ọrịa ụfọdụ dị ka Staphylococcus aureus na Escherichia coli. Yabụ na ọ na - echebe akpụkpọ ahụ pụọ na gburugburu nsogbu. Ọ bụ akwa zuru oke maka mmemme egwuregwu n'èzí ebe anwụ, mmiri, na oke ọhịa dị. Nzute ọ bụla na oyi akwa nke achara spandex jersey ga-echebe gị pụọ na ọrịa anụ ahụ site na gburugburu ebe obibi.